Taasi waa sababta Deadpool aysan boos uga helin MCU xilligan - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » madadaalo Taasi waa sababta Deadpool aysan boos uga helin MCU xilligan - BGR
Taasi waa sababta Deadpool aysan boos uga helin MCU xilligan - BGR
Iibsiga Disney ee Disney waa iibsiga Marvel oo ah jilaayaal badan oo loo badinayo in lagu soo bandhigi doono MCU sannadaha soo socda, oo ay ku jiraan Deadpool, X-Men, iyo Fantastic Four. In kasta oo Marvel ay u badan tahay inuu ka biloowdo xoqidda marka loo eego X-Men iyo Fantastic Four, isagoo iska indhatiraya wax kasta oo dhacay wakhtiyadii la soo dhaafay, Deadpool ayaa sii ahaan doona sida ay hadda tahay. Ryan Reynolds wuxuu sii wadan doonaa jilida dabeecada waxaana suuragal ah inuu soo bandhigi doono wax qabad superhero madow ah sida filimadii hore. Laakiin waxaa jira dhibaato weyn oo ka mid ah aflaamta hore ee ka horjoogsanaya Deadpool in ay booskiisa ka hesho MCU iyo mid ka mid ah Avengers-ka.
Hadaad horey u aragteen dhamaan Deadpool et Avengers waxaad u badan tahay inaad durba ka shakisan tahay waxa ay dhan tahay - waana qaladkii Marvel, dhanka kale. Adeegsiga Reddit Joonicks kaliya waxay ubaahantahay jumlado dhawr ah si ay ugu sharxaan waxkasta oo khaldanaa Deadpool marka loo eego xaalada MCU:
Deadpool 2 waxay ku lug lahayd safarka dib ugu soo noqoshada wakhtigaas oo umuuqda mid aan la jaanqaadi karin adduunka ugu weyn ee 'MCU', maadaama Teddy Cables uu ka yimid jadwal ka duwan, laakiin isbeddelay isagoo ka jawaabaya ficilada Deadpool. Saamaynta noocan oo kale ah ayaa si cad loogu diiday Avengers: Endgame. Markaa, Deadpool waxay ku jirtaa xaqiiqo ka duwan oo leh sharciyo kala duwan oo dabiici ah, ma ahan oo keliya xaalad kale.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu murugsan ee on of Ragaha: Endgame waxay la xiriirtaa safarka waqtiga. Marvel wuxuu si dhab ah ula macaamilay arintan, isagoo kaftamaya dhamaan filimada kale ee safarka ee noo sheegay inaad badali kartid waxyaabihii aad soo dhaafay si aad ubadasho hada iyo mustaqbalkaaga. Safarka waqtiga Fingame isku mid maaha midka Soo noqo mustaqbalka sida Professor Hulk uu sharraxay filimka. laakiin Deadpool 2 isticmaalaa isla fikradaha safarka ee kii lagu soo kordhiyey . Dib ugu noqo mustaqbalka .
In kasta oo dadka intiisa badani aanu dhibsanayn dhibaato sidan oo kale ah, haddana waa ay jiraan. Dhibaatooyin badan oo sii-socda oo loogu talagalay MCU mar haddii Deadpool ay qayb ka tahay. Marka, Marvel waxaa laga yaabaa inuu u baahdo inuu dib ugu noqdo dhacdooyinka Deadpool 2 si loogu waafajiyo xaqiiqda MCU. Laga yaabee in Wade Wilson qiyaasta wax walba? Tani waxay sidoo kale sharrax ka bixinaysaa sababta ay Cable u ekaanaysay sidii Thanos oo kale iyo sababta safarka saacaddu khatar ugu jirto.
Taasi waxay dhahday, waxba ma dhahayo goorta Deadpool la keenayo MCU maxaa yeelay Marvel ma aysan sameyn wax ogeysiis ah oo la xiriira Deadpool ee Wajiga 4.
Hulu waxay ku garaacday Netflix aag laga yaabo inay kugu yaabto - BGR
Soprano wuxuu sameeyaa kalsooni aan badnayn oo ku saabsan